I-IWCA ye-Intanethi yeNtsebenziswano – uMbutho wamaZiko okuBhala aMazwe ngaMazwe
Intsebenziswano: 9 Matshi 2022
Yiya kwi Indawo yelungu le-IWCA ukubhalisa
Uyamenywa ukuba ungenise isiphakamiso se-IWCA Online Collaborative—Ubizo lwezindululo lungezantsi. Njengoko siqhubeka nokuzamazamana nobhubhane kunye neempembelelo zawo emsebenzini nakwintlalontle yethu, siyathemba ukuba olu suku kunye luya kusinika ithemba namandla, izimvo kunye nonxibelelwano.
Kwikhwelo lakhe kwiNgqungquthela yoNyaka yeCCCC yowama-2022, uSihlalo weNkqubo u-Staci M. Perryman-Clark usimema ukuba sicingisise ngombuzo othi, “Kutheni ulapha?” kunye nokuqwalasela imvakalelo yokuba thina kunye nabafundi bethu esinokuba nayo okanye singabi nayo kwiindawo zethu.
Njengoko siqhubeka nokujonga ubhubhani we-COVID19 esinawo, siphinda sihambisa inkomfa kwi-intanethi, sidiniwe kulwazi olungangqinelaniyo noluphikisanayo kunye nemigaqo-nkqubo ejikeleze imaski, ugonyo, kunye nokusebenza ekhaya-siphendula njani isimemo sikaPerryman-Clark sokuchasa, ukusinda. , ukusungula izinto ezintsha, nokuphumelela? Sithatha inxaxheba njani “kumsebenzi wobukroti [obalulekileyo] nokwinkqubo”? (Rebecca Hall uMartini kunye noTravis Webster, amaZiko okuBhala njengeZikhala ezinesibindi / r: Intshayelelo yoMba okhethekileyo Ukujongwa kwakhona koontanga, Umqulu 1, i-Issue 2, Fall 2017) Kwi-paradigm entsha ye-hybrid, i-intanethi, i-virtual, kunye nokufundisa ubuso ngobuso, njani izithuba zokubhala iziko kunye neenkonzo ziqhubeka zivulelekile kubo bonke abafundi? KwiNdibaniselwano ye-IWCA ye-Intanethi ka-2022, izindululo ziyamenywa kusetyenziswa le mibuzo ilandelayo njengeebhodi zokuqala:
Umsebenzi wobulungisa bentlalontle ukhangeleka njani kumaziko ethu? Ngubani oziva emenyiwe kwiindawo zethu kwaye ngubani ongamenywayo? Senza ntoni ukuqinisekisa ukusinda kwabasebenzi bethu, abafundi esibakhonzayo? Yintoni esiyenzayo ukwenza ngaphezu kokusinda, kodwa ukuphumelela?
Kwi-2022 IWCA Online Collaborative, simema izindululo zeeseshoni ezijolise ekuxhaseni omnye nomnye kuyilo kunye nokulinga, kwaye sigxininise kwinkqubo, kungekhona imveliso, yophando. Iiseshoni kufuneka zenze enye okanye ngaphezulu kwezi zilandelayo:
Mema abanye abathathi-nxaxheba ukuba bacinge, bacinge, okanye baphuhlise ingqiqo yeendawo ezinokubakho/izalathiso kwiziko lokubhala uphando malunga nokubandakanywa
Khokhela abanye abathathi-nxaxheba kwiindlela zokusebenzisa uphando lweziko lokubhala ukubamba ngcono ubungakanani bomsebenzi esiwenzayo, ukwenza amabali ethu anyanzelise kubaphulaphuli abaninzi esibandakanyeka kuzo ngaphakathi nangaphaya kwesetingi zamaziko ethu.
Vumela abanye abathathi-nxaxheba ukuba benze izinto ezintsha kuphando lweziko lokubhala, kubandakanya ukutyhala ngokuchasene nemida okanye imiba enxulumene namadoda, abamhlophe, abanako, kunye nezithethe zobukoloniyali kwiziko lemfundo.
Yabelana ngemisebenzi eqhubekayo malunga nengxelo evela kwezinye iingcali zeziko lokubhala kunye nabahlohli
Khokhela abathathi-nxaxheba ngeendlela esinokuthi sizijike kwiinjongo zabo ezilungileyo malunga nokubandakanya bonke abantu kunye nokuchasana nobuhlanga babe ngamanyathelo abambekayo entshukumo.
Khokhela abathathi-nxaxheba ukuba bacinge kwaye bacwangcise indlela indawo yethu yokubhalela, indlela yokuziphatha, kunye/okanye injongo inokutshintsha njengoko sijonga indlela i-COVID eyichaphazela ngayo indawo yethu yokusebenza.
Mema abathathi-nxaxheba ukuba baphuhlise izicwangciso zentshukumo zokuxhathisa, ukuphila, ukusungula izinto ezintsha, kunye nokuphumelela.
Kunokuthiwa amandla ecandelo lethu yindalo yethu yokusebenzisana-simema abathathi-nxaxheba ukuba badibane ukuze sikhulise ukuqonda kwethu-kunye nokuzibandakanya kunye-yantlukwano, ulingano, kunye nokubandakanya yonke indawo amaziko okubhala akhoyo.
Ngenxa yokuba iNtsebenziswano imalunga nokuxhasana kuyilo kunye nokulinga, izindululo kufuneka zijolise kwinkqubo, hayi imveliso, yophando; sigcine ifomathi eyodwa ekhethekileyo-i-"Dash Dash" -inani eliqingqiweyo leziphakamiso ezigxile ekwabelaneni ngeziphumo zophando. Zonke iziphakamiso, kungakhathaliseki ukuba zeziphi na iifomathi, kufuneka zizame ukumisela umsebenzi ngaphakathi kwendawo yokubhalela kunye / okanye i-scholarship evela kwamanye amacandelo.
Iindibano zocweyo (imizuzu engama-50): Abaququzeleli bakhokela abathathi-nxaxheba kwizandla, umsebenzi onamava ukufundisa izakhono ezibonakalayo okanye izicwangciso ezinxulumene nophando lweziko lokubhala. Izindululo zocweyo ezibe yimpumelelo ziya kubandakanya ixesha lokudlala ngeengcinga zethiyori okanye ukubonakalisa impumelelo yomsebenzi okanye izakhono ezifunyenweyo (ingxoxo yeqela elikhulu okanye elincinci, iimpendulo ezibhaliweyo).
Iiseshoni ezijikelezayo (imizuzu engama-50): Abaququzeleli bakhokela ingxoxo yomcimbi othile onxulumene nophando lweziko lokubhala; le fomathi inokubandakanya amagqabantshintshi amafutshane phakathi kwabanikezeli bengcaciso abayi-2 ukuya kwe-4 elandelwa luthethathethwano olusebenzayo nolusebenzayo/intsebenziswano nabazimasayo okuqhutywa yimibuzo esisikhokelo.
Izangqa zokuBhala ngeNtsebenziswano (imizuzu engama-50): Abaququzeleli bakhokela abathathi-nxaxheba kumsebenzi wokubhala weqela ojoliswe ukuvelisa uxwebhu olubhalwe ngokubambisana okanye izixhobo zokuxhasa ukubandakanywa.
Iingxoxo zikaRobin ezijikelezayo(imizuzu engama-50): Abaququzeleli bazisa isihloko okanye umxholo kwaye baququzelele abathabathi-nxaxheba babe ngamaqela amancinci okuqhawula ukuqhubeka nencoko. Ngomoya weetumente "ze-robin", abathathi-nxaxheba baya kutshintsha amaqela emva kwemizuzu ye-15 ukwandisa kunye nokwandisa iingxoxo zabo. Emva kwemijikelo emibini ubuncinane yencoko, ababhexeshi baya kudibanisa iqela elipheleleyo kwingxoxo yokuqukumbela.
Unikezelo lweDash Dash (imizuzu eli-10): Bonisa umsebenzi wakho ngohlobo lwe-20×10: izilayidi ezingamashumi amabini, imizuzu elishumi! Le ndlela intsha engenye yeseshoni yepowusta ibonelela ngendawo efanele iintetho ezimfutshane, zabaphulaphuli ngokubanzi ezihamba kunye nezixhobo ezibonakalayo. IDash Dash ifaneleke ngokukodwa ukunika ingxelo ngophando okanye ukutsalela ingqalelo kumbandela omnye okanye into entsha.
Iindibano zocweyo zokuSebenza ezikwiNkqubela (imizuzu eli-10 ubuninzi): Iiseshoni ze-Works-in-Progress (WiP) ziya kuqulunqwa ngeengxoxo ze-roundtable apho abanikezeli-ntetho baxoxa ngokufutshane ngeeprojekthi zabo zophando lwangoku baze bafumane impendulo evela kwabanye abaphandi kubandakanywa iinkokeli zengxoxo, abanye abanikezeli be-WiP, kunye nabanye abahamba-nkomfa abanokuthi bajoyine ingxoxo.
Ungeniso olufunekayo: ngoFebruwari 20, 2022
Ukungenisa isindululo kunye nokubhalisa kwiNtsebenziswano, ndwendwela https://iwcamembers.org.
Imibuzo? Qhagamshelana nenkomfa omnye wosihlalo, uShareen Grogan, shareen.grogan@umontana.edu okanye uJohn Nordlof, jnordlof@eastern.edu.